Iyo Pokémon yeGoridhe uye Sirivhi Editions inosvika pamwe neyeKisimusi yekuvandudza yePokémon Go | IPhone nhau
Iyo Pokémon yeGoridhe uye Sirivhi edhisheni inosvika pamwe neyeKisimusi yekuvandudza yePokémon Go
Vangani venyu makagadzirira € 10 iyo ichafanirwa kubhadharwa Super Super Run?, pamwe akawanda, uye ndizvo izvo hype iri kugadzira uyu mutambo wakanyanya kukwirira. Izvo zvekuti vakomana paNintendo havana kunetsekana nekuita kuti tipfuure mubhokisi uye kutisiira € 10 kuti titambe. Kwete, haigone kubiridzirwa nekuda kwekudzivirirwa (chisungo chekubatana neinternet) icho mutambo unouya nacho.
Uye zvinoita sekunge hofori Nintendo ichangobva kuwana hanzi inokandira mazai egoridhe, zano rakatanga neNiantic nekutangwa kwePokémon Go, uye izvozvi zvinozoitika neSuper Mario Run. Asi isu hatigone kukanganwa kuti Pokémon Go yakanga iine punchi diki, kana zvakadaro zvinoita. A Pokémon Go iyo yaigara pamapeji epamberi enhau huru uye kuti nhasi, kunyangwe ichiri chipenyu, ingori nhau dzine mishumo uye nhau. Iyo nyowani, a Kisimusi vhezheni inoperekedzwa nengano Pokémon kubva kuGoridhe uye sirivheri edhisheni ...
Hongu, sekuona kwawakaita muvhidhiyo yapfuura, ikozvino tichava nengano Pokémon saTogepi, Pichu, uye imwe yePokémon yakawanda yatakawana mune enhema Pokémon Sirivheri uye Pokémon Goridhe edhisheni. Pamusoro pezvo, isu tichazotambawo neKisimusi Pikachu akapfeka ngowani yaSanta Claus kutiperekedza pazororo redu mumazuva ano eKisimusi.
Iyo yeKisimusi yekuvandudza iyo, sekureva kwevakomana paNiantic, inofanirwa kutikurudzira isu tsvaga Pokémon munharaunda medu nehama dzedu, Handizive kana izvi zvichizoshanda kudaro. Uye zvakare, kudyidzana nemhando dzakasimbiswa, ikozvino iwe unogona zvakare kuwana zvakasarudzika zvemukati pane saiti seSprint, Boost Mobile, RadioShack, uye Starbucks. Saka unoziva, kukufadza iwe neazvino Pokémon Go kunatsurudza uye unakirwe nenhau idzi dzese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Iyo Pokémon yeGoridhe uye Sirivhi edhisheni inosvika pamwe neyeKisimusi yekuvandudza yePokémon Go
Mimwe mireza yedunhu ichawedzerwa ku Unicode muna 2017
Ruzivo rutsva zvakare rwunovimbisa kuti maAirPod anosvika Krisimasi isati yasvika